महन्थ र राजेन्द्रलाई मुर्ख भन्दै उपेन्द्र यादवको सचिवालयले गर्यो पार्टी फुटेको घोषणा, भष्मासुर बने यादव !Nepalpana - Nepal's Digital Online
आइतवार, जेठ २ गते २०७८
२०७८, जेठ २ गते
महन्थ र राजेन्द्रलाई मुर्ख भन्दै उपेन्द्र यादवको सचिवालयले गर्यो पार्टी फुटेको घोषणा, भष्मासुर बने यादव !
Nepal Pana बैशाख ४ २०७८
काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल औपचारिक रुपमै विभाजनको घोषणा भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सचिवालयले पार्टी फुटेको घोषणा भएको हो ।
गत वैशाखमा राजपा र समाजवादी पार्टीबिच एकता भई जसपा बनेको थियो । राजपाको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरेका थिए भने समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई थिए ।
अहिले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा केपी ओली सत्ताबाटै मधेसका मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने भनेर वार्ता गरिरहेको छ । तर उपेन्द्र र बाबुरामको समाजवादी पार्टीले नयाँ गठबन्धनका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ ।
मधेस मुद्दा र नयाँ सत्तालाई लिएर पार्टीभित्र प्रष्ट रुपमा दुई लाइन देखिएका बेला उपेन्द्रको सचिवालयले पार्टी एकता भंग गरेर समाजवादी पार्टी ब्युँतिएको घोषणा गरेको हो ।
उपेन्द्रका छोरा एवं जसपा महानगर समिति अध्यक्ष अमरेन्द्र यादवले समाजवादी पार्टी ब्युँतिएको घोषणा गरेका हुन् ।
अमरेन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन समाजवादी पार्टी जसपाबाट अलग्गिएको उल्लेख गरेका छन् । यसका लागि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, समाजवादी पार्टी बिच गठबन्धन बन्ने निश्चित भएको अमरेन्द्रले जानकारी दिएका छन् ।
अमरेन्द्र उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव समेत थिए । अमरेन्द्रले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई मुर्ख पनि भनेका छन् । ठाकुर र महतोको मुर्खताले दुई तिहाईको कोमहल सम्म चकनाचुर भएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसो त जसपामा बाबुराम भट्टराई पनि समाजवादी पार्टी अलग गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धन गर्ने पक्षमा छन् । तर महन्थ ठाकुर भने नयाँ गठबन्धनको पक्षमा छैनन् । मधेसका मुद्दामा जहिल्यै ठगेकाले अहिले ओली सत्ताबाटै समाधान गर्ने पक्षमा छन् । उनी परिआए नेतृत्व लिन पनि तयार भएर बसेका छन् । तर गठबन्धन नगर्ने र सत्तामा नजाने अडानमा छन् ।
यादवलाई मधेसका एक जना विश्लेषकले भष्मासुरको संज्ञा दिएका छन् ।
बाबुरामसहितको जसपा टोली बूढानीलकण्ठमा, प्रचण्ड ओलीलाई आपत !
बुढानीलकण्ठबाट कांग्रेस–जसपाकाे नयाँ रणनीति, एकजुटहुँदै गर्याे यस्तो घोषणा !
जसपाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन गर्ने
'केपी ओली भ्रष्टाचारीको नाईके हुन्'
बैशाख ४, २०७८ शनिवार ०९:२६:१६ बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्री सामु झुकेको फोटो भाइरल भएपछि एक नेताले दिए स्पष्टिकरण !
महन्थ ठाकुर पक्षकै शरणमा जाने उपेन्द्र यादव र बाबुरामको संकेत !
ओली-नेपालबीच नयाँ सफलता, सिंहदरबारमा भयो कमाल !
ओलीका पालामा उधुम विकास, उद्घाटन बढी गर्दा आत्तिएपछि दिए दनक !
काठमाडौं रेजर्सले जित्यो नेपाल सुपर लिग
आफैँले कोरोना परीक्षण गर्न मिल्ने किट, हरेक पसलमा उपलब्ध !
बालुवारटार पुगेर बाबुरामले ओलीसँग प्रधानमन्त्री बनाइदिन हारगुहार गरेको खुलासा
स्याल हुइँया नगर्न उपेन्द्र र बाबुरामलाई महेश बस्नेतको चेतावनी, सार्वजनिक भयो यस्तो प्रमाण
उपेन्द्रले झुटो खबर फैलाएपछि महन्थ ठाकुर आक्रोशित, विज्ञप्ति निकाल्दै दिए दनक!
उपेन्द्र बाबुरामको अर्को कर्तुतको पर्दाफास, महेश बस्नेतलाई जोडेर पार्टीको बदनाम गरेपछी जसपाद्वारा प्रमाण सार्वजनिक!